စက်တင်ဘာလ 2019 - စာမျက်နှာ2/ 18 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
လများ: စက်တင်ဘာလ 2019
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında gençlerle birlikte pedal çevirip, tüm Kayserililere “Bisiklete Binin, Spor Yapın” çağrısında bulundu. Büyükşehir olarak yılda 500 bin insana spor yaptırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, [ပို ... ]
Konya Bilim Merkezi, Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katılıyor. Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen, milyonlarca kişinin [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေး၏စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အအခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနပြင်ဆင်သည့်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးခွင့်ပြုချက် Regulation: စည်းမျဉ်းဆောငျးပါး 1 မှာပြင်ဆင်သည့်ရထားလမ်းစီမံထိန်းချုပ်အာဏာပိုင်များ၏စည်းမျဉ်း - 19 / 8 / 2016 29806 အမှတ်ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏တရားဝင်ပြန်တမ်းခွင့်ပြုချက်ထုတ်ဝေရက်စွဲပါ [ပို ... ]
အဆိုပါ RAI ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဒု-TCDD ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆောင်သောအီရန်မီးရထား၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံစျေးကွက် Babak Ahmadi များအတွက် (RAI) ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏လက်ထောက်ဒါရိုက်တာနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ, တူရကီအတွက် Cetin Altun TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင် [ပို ... ]
မိမိအတာဝန်များကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်တာဝန်များကိုKekeçအီဘရာဟင်ကိုထုတ်တင်ဆောင်လာသောအတွက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) စာနယ်ဇင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှ၏သမ္မတနိုင်ငံ။ Kekeç, လူမှုရေးကွန်ယက်၏ခွဲဝေမှုကိုအောက်ပါလိပ်စာဖန်ဆင်းတော်မူပြီ: "ငါအောင်မြင်စွာစာနယ်ဇင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြံပေး execute TCDD ၌ရှိ၏ [ပို ... ]
Geçimini pazarcılık yaparak sağlayan 58 yaşındaki Nurduvan Aktürk, pazarda satacağı malzemeleri almak için fiyatı daha uygun olan treni seçti. Tren hareket ettikten kısa süre sonra meydana gelen katliam gibi kazada ise kolunu kaybetti. Kendini toparlamaya [ပို ... ]
Corlu ရထားပျက်စီးမှုတုံ့ပြန်မှု Aaile ထံမှ TCDD!
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren katliamında 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişide yaralanmıştı. TCDD sosyal medya hesabından Ankara YHT Garı ile ilgili, “TCDD’nin yeni vizyonuna [ပို ... ]
အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက် Set မှတိုးတက်မှုအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İnşaat faaliyetlerinde bir [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 19 1923 ဥပဒေလက်ခံခဲ့သည်
သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 19 1922 Uşakနှင့် Ahmed ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်ယနေ့ဘူတာပြုပြင်ကြစေနိုင်သည်။ မီးရထား, Izmir-Kasaba လိုင်း extension များနှင့် Mudanya-Bursa နှင့်İzmirဆိပ်ကမ်းမီးရထားလိုင်း Orient လိုက်လျောလက်ခံခဲ့သည်တစ်ပညတ်တရားအားဖြင့် 19 စက်တင်ဘာလ 1923 Aydin [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3၏ကို Maintenance စာချုပ်များရလဒ်ဖျော်ဖြေ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံပြီးတော့ Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်။ ယ်ယူခြင်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (TCDD) 2019 / 404206 404.632,68 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL [ပို ... ]
Kayaş- Kayseri အကြားတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး4၏ရထားလမ်း2ပမာဏစွမ်းအင်ဂီယာလိုင်းပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်ရေးစျေးပြိုင်ရလဒ်ပျထှေးသောနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးန်ဆောင်မှုများ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 411458 1.610.347,17 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL [ပို ... ]
အဆိုပါ 31 390 + လိုင်းကီလိုမီတာ Tekirdag Muratli (MURATLI Müselles) တွင်တွေ့သည်အဆင့် Crossing ရော်ဘာ (ရော်ဘာ) coated လုပ်ငန်းတင်ဒါတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး 1 ၏ရလဒ်အဖြစ်ရုပ်ဖျက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထောက်ပံ့ကုန်၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 434181 105.751,72 အရေအတွက်ကို JCC ကန့်သတ်ရန် [ပို ... ]
ရဲများကနေဖြင့်ရိုက်နှက် Manisa TCDD ဝန်ထမ်းရေးရာအတွက်စွပ်စွဲချက်ဘူတာ
Manisa ကြယ်အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလုံခြုံရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့စခန်းပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဖွငျ့စွပ်စွဲချက်ကြေငြာချက်နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုအတွက်ရဲကရိုက်နှက်ခံရဖို့တာဝန်ရဲ့အစမှာမျှော်လင့်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ လုပ်စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့; Manisa ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုံခြုံရေးစောင့်တပ်စခန်းထဲမှာမဲပေးသူကို "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်နှင့်အတူမိုင်အကွာအဝေး Engine ကိုမြန်နှုန်း Maglev Train ၏ 600 ထုတ်လုပ်
တစ်နာရီကို 600 ကီလိုမီတာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Maglev ရထား "linear မော်တာ" နှင့် "လျှပ်စစ်" ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အရည်အချင်းများရှိခြင်းမနေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့် Maglev ရထား Zhuzhou Engine ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးဆိုပါတယ်အုပ်စုတစ်စုကထုတ်လုပ် CRRC [ပို ... ]
စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမီးယင်း၏ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အတွက် Istanbullight ကွန်ဂရက်ဆီဖွင့်လှစ်
တူရကီအလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်း, ıstanbullight, 12 နှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအတူတကွမြင်၏။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Lighting & လျှပ်စစ်ပြပွဲနှင့်ကွန်ဂရက်ထောက်ပံ့, 18 စက်တင်ဘာလအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲ Center မှာဧည့်သည်မှဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 12 ။ အမျိုးသား Lighting ကွန်ဂရက်နှင့်လည်းဒီဇိုင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးxnumx.aydınlatမှအိမ်ပြန် [ပို ... ]
ဆောင်းရာသီရာသီSarıkamışနှင်းလျှောစီး Center ကပြင်ဆင်နေ
တူရကီရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် 2019-2020 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ထွန်းလင်းကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသည့် Kars တူရကီရဲ့မိဘမဲ့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, Sarıkamışနှင်းလျှောစီး Center ကဆောင်းတွင်းရာသီအဘို့ပြင်ဆင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနှင့်သာတူရကီSarıkamışနှင်းလျှောစီးစင်တာများ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်တူရကီရဲ့မိဘမဲ့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် built-in ခံတစ်ဦးလေဆိပ်သစ်, အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ခရီးသည်အရေအတွက်ကဒီမှာနေ့တိုင်းပိုပိုပြီးများအတွက်သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်ဤလူများ၏အရေးပါသောအရေအတွက်ကရောက်ရှိလာသော [ပို ... ]
ဟောင်ကောင်, 8 ပြည်သူ့ဒဏ်ရာရသူများတွင်မီးရထားလွဲသွား
ဟောင်ကောင်, ဒဏ်ရာရသူ 8 အတွက်မီးရထားလွဲသွား။ ပတ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်တရုတ်မီးရထားပျက်ကျမှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများဟောင်ကောင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်ရှိခရီးသည်ရာနဲ့ချီနှင့်အတူရထား, Kowloon အတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ 8 လူများမတော်တဆမှုအပြီးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Canray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Alstom ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဟာအိမ်ရှင်အဖြစ်
တစ်ခုထူးကဲမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Canray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်တည်ရှိသည်Yeşilovaဦးပိုင်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Alstom နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ Alstom ရဲ့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဧည့်ခံ။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို၏နောက်ဆုံးနှစ်များတွင်Yeşilova Holding ကုမ္ပဏီ 44 [ပို ... ]
အဆိုပါ Hejaz မီးရထားဝန်ကြီး Ersoy မှမြင်ကွင်းများ
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Nuri Mehmet Ersoy, Hejaz မီးရထားအာမန်ဘူတာရုံမှာ TIKA ပွနျလညျထူထောငျအလုပျခွငျးအားဖွငျ့ထိန်းသိမ်းထားရှုမြင်ကြသည်။ Ersoy, အော်တိုမန်ခေတ်နှင့်ပကတိဖြစ်လေ၏, ခေတ္တမျှတစ်ဦးလှည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူရှေးကာလမှပြန်လာသောခရီးထွက် [ပို ... ]